နွေလှိုင်ဿုန်း: မြန်မာပြည်တွင် မြန်မာbloggerများအား bannedလိုက်ခြင်း
မြန်မာပြည်တွင် မြန်မာbloggerများအား bannedလိုက်ခြင်း
ကျနော်ပြောဆိုနေချိန် အတွင်းမှာပဲ မြန်မာ bloggerတွေကို Bagan Net က bannedလိုက်ကြောင်းပါ ။
Access has been deniedThe access to requested URL has been denied.www.nwayhlaingthoone.blogspot.com/To have the rating of this web page re-evaluated please contact your administrator.
Access has been deniedThe access to requested URL has been denied.www.graceswezinhtaik.blogspot.com/To have the rating of this web page re-evaluated please contact your administrator.
Access has been deniedThe access to requested URL has been denied.www.drlunswe.blogspot.com/To have the rating of this web page re-evaluated please contact your administrator. ဒါဟာ သွားမိတဲ့ဘလော့ခ်တချို့ကိုတွေ့မြင်ရတဲ့ အခြေအနေပါ ။ကျနော့်စာမျက်နှာဆို ဘာမှ အလေးထားလောက်စရာ မရှိတဲ့ ဘလော့ခ်တစ်ခုပါ ။ဒါပေမဲ့ ကျနော်လည်း ပါသွားတယ် ။မြန်မာonline userများသွားလာတတ်တဲ့ ဘလော့ခ်မှန်သမျှရှေးဦးစွာ bannedခံရတာမို့ ကျော်သွားလို့ ရအောင်လုပ်ထားတဲ့ http://proxyspy.blogspot.com/ဒီစာမျက်နှာကိုလည်း
ERRORThe requested URL could not be retrievedWhile trying to retrieve the URL: http://proxyspy.blogspot.com/The following error was encountered:* Connection to 72.14.207.191 FailedThe system returned:(61) Connection refusedThe remote host or network may be down. Please try the request again.Your cache administrator is webmaster@bagan.net.mm.Generated Tue, 25 Sep 2007 12:06:21 GMT by cache-dial.bagan.net.mm (squid/2.6.ST ဒီဘလော့ခ်ပါ ပါသွားပါတယ် ။
ကျနော်တို့ နည်းလမ်းရှာ ကြဖို့ နှိုးဆော်ရင်း
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသည့် ရဟန်းရှင်လူပြည်သူများ ဘေးကင်းကျန်းမာ လိုရာပန်းတိုင်ရောက်နိုင်ကြပါစေ ။
ပြည်မြန်မာကြီး အမြန်ဆုံးလွတ်လပ်ပါစေ ။
Posted by nwayhlaing thoone ကိုယ်တိုင် ... Tuesday, September 25, 2007
ရဲရဲသာ ရေးလိုက်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆည်းဆာရိပ် ဂီလာန ဘိုးဘွားရိပ်သာတည်ဆောက်ရေး
လှူဒါန်းလိုသူများဆက်သွယ်ရန် ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်(စာရေးဆရာမ) ၀၉-၉၉ -၂၈၅၄၉၊ ၀၁-၂၀၅၄၅၁ ဒေါ်သက်နွယ်(တရားရုံးချူပ်ရှေ့နေ) ၀၉-၅၀၄၃၉၅၉ ၊၀၁-၃၈၈၁၃၂ ဒေါ်ထွေးမြင့်(တရားရုံးချူပ်ရှေ့နေ) ၀၉-၉၀ ၄၂၄၈၈ ၊၀၁-၂၉၀၉၆၄ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း(တရားရုံးချူပ်ရှေ့နေ)	၀၉-၅၀၅၉၉၈၂ ဒေါ်ရီရီမေ(တရားရုံးချူပ်ရှေ့နေ) ၀၉-၅၀၅၅၀၆၀	ဒေါ်ခင်မေထွေး(တရားရုံးချူပ်ရှေ့နေ) ၀၉-၅၀၈၈၂၀၃ ဒေါက်တာထားထား(စာရေးဆရာမ) ၀၉-၂၀၁၇၉၆၁
The Blog of Myanmar Hip Hop Association
ကဗျာ၊ ဖြန့်ဝေခြင်း (1)
သတင်း ၊ဖြန့်ဝေခြင်း (11)
စစ်အစိုးရ၏ ၂၆.၉.၀၇ နေ့ ရိုင်းပျစော်ကားမှု
မြန်မာပြည်တွင် မြန်မာbloggerများအား bannedလိုက်ခြင...
သစ်ပင်လေးရဲ့ နွေ ဦး ပုံ ပြင်
မြန်မာဘလော့ကာတို့ ၏ တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်များ